को बन्ला अबको अर्थमन्त्री ? « Np Online TV
को बन्ला अबको अर्थमन्त्री ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको देखिए पनि अब सरकार मा आफ्नो स्थान बनाउन नेताहरुबीच शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ ।
यस्तै शक्ति संघर्षको परिणामस्वरूप अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना विपरित खतिवडा बाहिरिएपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिम सशक्त बनाउने रणनिति बनाउन लागेको बुझिएको छ।
यस सुचिमा अहिले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेल अगाडी देखिएको प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताले खरीबोटलाई बताएका छन् । यद्यपी उनी प्रदेश सांसद रहेकाले उनलाई केन्द्रमा सांसद बनाएर मन्त्री बनाउन लाग्ने प्रक्रिया भने सहज देखिदैन ।
अर्थमन्त्रीमा वामदेव गौतमदेखि विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेसम्मको दाबि रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली यी नामहरुमा कन्भिन्स नदेखिएको बताइएको छ । त्यसकारण अहिले उनी अर्थमन्त्री आफैले राखेर खतिवडालाई सल्लाहकारको रुपमा राखेर मन्त्रालयको जिम्मा दिने रणनितिमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका छन् । पार्टीले निर्णय गरेपनि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सम्भावना अझै नसकिएको समेत बताइएको छ । अहिले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीबाट हुनु योजनाबद्ध ढंगबाट भएको प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनी पक्षको बुझाई रहेको छ । त्यसैले यस बीचमा गौतमलाई फकाउने प्रयास समेत जारी रहेको बताईन्छ ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डेको नाम अगाडी ल्याइएको भएपनि अहिले उनीहरुको सम्भावना नरहेको ओली निकट एक नेताले खरीबोटलाई बताएका छन् । महासचिव पौडेल अहिले पार्टीको काममै व्यस्त हुनुपर्ने आवस्था छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेता पाण्डेलाई ओलीले अहिले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नबनेको उनको तर्क छ ।
एक किसिमले हेर्दा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको सम्भावना देखिन्छ । उनी ओलीका विश्वास पात्र मात्र होइनन्, ओलीका हरेक कदमलाई आँखा चिम्लेर साथ दिने नेता पनि हुन् । अहिले उनी प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा रहेपनि कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा उनले मुख्यमन्त्री छोडेर केन्द्रीय सरकारमा आउने चाहना समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेको बुझिएको छ । अहिले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले समेत पोखरेलको सम्भावनालाई बढाएको देखिन्छ । किनकी कार्यदलको सुझाव पार्टीको स्थायी कमिटीबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्न पनि केहि समय लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको बुझिएको छ । तर यसमा उनलाई कसरी केन्द्रमा सांसद बनाउने भन्ने विषय भने जटिल नै रहेको देखिन्छ ।